“ငါကထက်မြက်တဲ့ မိန်းမဟဲ့။ ငါ့လောက် ဘယ်သူမှမတတ်၊ ဘယ်သူမှမတော်ဘူး။” ဆိုပြီး အချေကြီးတစ်လိုင်းနဲ့ လူတကာကို အထင်သေးနေတဲ့မိန်းမက ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ,မဟုတ်ပါဘူး။ ငပေါကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီနေ့ခေတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ၊ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမဆိုတာကို သိကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် တကယ်ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲရော သေချာသိကြရဲ့လား?? အိုကေ… မသိသေးရင် အချက်လေးတွေနဲ့ ပြောပြမယ်နော်။
၁။ သူများနဲ့ ကွဲပြားခြားနားရဲတယ်။
နေရာတကာ “I’m so different” ဆိုပြီး အထာကြီးနဲ့နေနေတာမျိုးကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူက တစ်မူထူးခြားနေရမယ်။ ပြောချင်တာက ဒီလိုကွာ… အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ ပြီးရင် သူတို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ၊ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေက အခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေရမယ်၊ တမူထူးခြားနေရမယ်၊ ရိုးရှင်းမှုက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လည်း ထူးခြားနေရမယ်။ ဒီလိုမျိုးပေါ့။
၂။ အားနည်းချက်ကိုလက်ခံပြီး အားသာချက်တွေနဲ့ တောက်ပနိုင်ရမယ်။
သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်၊ ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာက ရုပ်ရှင်တွေ၊ ပြဇာတ်တွေထဲမှာပဲ ကောင်းပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့လောကမှာ ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာက နည်းနည်းလေးတောင် ဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့အရာပါ။ အဲ့ဒီတော့ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို လက်ခံပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်၊ အားသာချက်တွေကို အသုံးချပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာ အလင်းလက်ဆုံးတောက်ပနိုင်အောင် ကြိုးစား … အဲ့ဒါဆိုရင် သင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင် ထက်မြက်တဲ့မိန်းမမဟုတ်တော့ဘဲ ဘယ်နေရာမှာမဆို ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်။
အခြားသူတစ်ယောက်က သင့်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ မျှော်ကိုးနေမယ်၊ အခြားသူတစ်ယောက်ကို အားကိုးဖို့မျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင် သင်က ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ? အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ရမယ်၊ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး၊ တစ်နေ့တာ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ၊ အသားအရေကအစပေါ့။ အဲ့ဒါတွေကမှ ရဲရင့်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပုံစံပဲ။
ပုရိသတွေက “အချစ်ရေ… ပြုံးပြုံးလေးနေ။ မင်းပြုံးလိုက်တာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးအရာပဲ။” ဆိုပြီး ဖြစ်နေအောင် ပြုံးပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာက မျက်နှာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ အလှပဆုံးပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဖိတ်ဖိတ်လက်နေတဲ့ အဝတ်အစားအကောင်းစားတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ချိုသာတဲ့အပြုံးပန်းလေးတစ်ပွင့်ပဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်ဆီမှာ အပြုံးထက်ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်အရာမရှိတော့ဘူးနော်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်က ပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးကို မြင်ဖူးလား?? မြင်ဖူးလား?? လို့ နှစ်ခါမေးလိုက်မယ်နော်။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ “ငါကထက်မြက်တဲ့ မိန်းမဟဲ့။ ငါ့လောက် ဘယ်သူမှမတတ်၊ ဘယ်သူမှမတော်ဘူး။” ဆိုပြီး အချေကြီးတစ်လိုင်းနဲ့ လူတကာကို အထင်သေးနေတဲ့မိန်းမက ထက်မြက်တဲ့မိန်းမ,မဟုတ်ပါဘူး။ ငပေါကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရုံနဲ့မရပါဘူး။ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်း လေးစားမှုနဲ့ လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်သမျှကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိမှသာ အမှန်တကယ် ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့။
အရှုံးပေးတတ်တယ်ဆိုတည်းက ဒီမိန်းမက ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မှ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ တကယ်ရဲရင့်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမဆိုတာက အရာရာကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်ထားပြီး အရှုံးမပေးစတမ်းရင်ဆိုင်ကြပါတယ်။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့ ရဲရင့်ပြီးထက်မြက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိန်းမတွေကရော ဒီလိုမျိုးအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံရဲ့လား???